Wada shaqeynta Sesame ee Afqanistaan ​​- Sinnaanta Helitaanka Caalamiga ah
Wada shaqaynta Sesame ee Afqanistaan
Iyada oo lagu soo bandhigayo Muppets ka Sesame Street, heesaha carruurta asalka ah ee Afghanistan, cayaaraha, iyo sheekooyinka, Sesame Garden waxay baraysaa carruurta yar-yar ee waddanka oo dhan iyada oo sidoo kale kor loogu qaadayo wacyiga iyo dhiirrigelinta dhaqan wanaagsan.
Afghanistan, Aqoon-is-weydaarsiga Sesame, Wasaaradda Arrimaha Dibedda Mareykanka
Aqoon-isweydaarsiga Sesame wuxuu ku faraxsan yahay inuu la shaqeeyo 'Equal Access International' si loo abuuro taxane idaacad ah oo aan raadineynin oo keliya barbaarinta iyo u diyaarinta carruurta noloshooda barashada, laakiin wuxuu u sameeyaa qaab u adeegsanaaya qaabka ugu saameynta badan uguna waxtarka badan ee warbaahinta Afghanistan. Iyada oo in ka yar saddex-meelood laba meel carruurta Afghanistan ay ku qoran yihiin dugsiga hoose, Baghch-e-Simsim waxay bixisaa waxyaabo muhiim u ah waxbarashada carruurta waddanka oo dhan.
H. Melvin Ming - Agaasimaha Guud iyo Madaxweynaha, Aqoon isweydaarsiga Sesame
Iskaashiga EAI ee Aqoon-isweydaarsiga sisinta ayaa galaya xilli-toddobaad ee guusha Baqdaad-e-Simsim (Sesame Garden) taxane idaacadeed si looga hawlgalo loona wacyi geliyo dugsiga hore iyo caruurta fasalka hore, macalimiinta, iyo daryeel bixiyaasha Afghanistan. Sesame Garden wuxuu soo bandhigayaa 'Muppets' adduunka caanka ah ee Sesame Street, jilayaasha maxalliga ah Zari iyo Zeerak, oo ay weheliso heesihii carruurtii asalka ahaa ee Afghanistan, ciyaaro, iyo sheekooyin si wax looga qabto arrimo fara badan oo waxbarasho oo ay ka mid yihiin qorista iyo xisaabta; aqoonta ku saabsan caafimaadka iyo badbaadada; sababaynta bulshada iyo sida loo arko dadka kale.
In ka yar saddex-meelood labo meel caruurta Afghanistan waxay ku qoran yihiin dugsiga hoose, Baqdaad-e-Simsim (Beerta Sesame) waxay bixisaa waxyaabo muhiim u ah waxbarashada carruurta dalka oo dhan. Dadka reer guuraaga ah, gaar ahaan gabdhaha da'da yar, ayaa leh xadidan nidaamka waxbarasho ee rasmiga ah, iyo barnaamijyada raadiyaha Sesame Garden waxay u oggolaadaan carruurtan inay marin u helaan wax qorista iyo xisaabta iyadoo loo marayo meel dhexdhexaad ah, oo ay heli karaan in kabadan saddex-meelood meel dadka reer miyiga ah.
Cilmi baaris ayaa muujisay in Baqdaad-e-Simsim barnaamijyada telefishanka iyo raadiyaha waxay saameyn wanaagsan ku yeeshaan natiijooyinka barashada muhiimka ah ee dhammaan goobaha manhajka ee daawadayaasha iyo dhageystayaasha. Ku baahinta telefishanka iyo raadiyaha waxay caawisaa inay gaaraan dhagaystayaasha magaalooyinka iyo miyigaba. Kusoo biiridii jilaha Muppet ee ugu horreeyay, Zari, oo loo yaqaan "cast" ee xilligii 5 ayaa si weyn u kordhinaya xasiloonida barnaamijka. Hab-dhaqankan 6-jirka ah wuxuu taageeraa qaab-dhismeedka carruurta ee Baqdaad-e-Simsim wuxuuna xoojiyaa dulucda muhiimka ah ee xoojinta gabdhaha. Laga bilaabo Xilliga 6, Zari waxaa ku darsaday walaalkeed Zeerak 4-sano jir, kaasoo eega Zari oo u arkaa inuu yahay qof ku dayasho mudan.
Yoolalka guud ee Baqdaad-e-Simsim waa in:
• Qaybi farriimaha dhiirrigeliya waxbarashada ilmanimada hore, ixtiraamka iyo fahamka, iyo aqoonsiga waddanka; iyo ka hortagga xagjirnimada gacan ka hadalka.
• Dhisaan awoodda maxalliga ah ee Afgaanistaan ​​si ay u soo saaraan tayo sare, madadaalo, iyo barnaamijyo telefishanno iyo barnaamijyo raadiye oo si wax ku ool ah wax uga qabta baahiyaha daran ee carruurta.
Waddan ay ku yar yihiin barnaamijyada telefishanka iyo barnaamijyada raadiyaha carruurta oo wax ku ool ah iyo khibrad kooban oo ku saabsan horumarka carruurta, Baqdaad-e-Simsim waa tiir ka mid ah telefishanka Afgaanistaan ​​iyo bulshooyinka madadaalada.EAI waxay soo saartaa oo baahisaa Baqdaad-e-Simsim 33 degmo oo ay iska kaashanayaan 44 idaacadood oo FM ah oo maxalli ah oo ay ku jiraan hal raadiye maxalli ah oo laga baxo NAWA oo ka kooban 18 degmo. EAI waxay hogaamisaa nashaadaadyo saameyn sare leh oo ay kujirto wareegyada dhageysiga bulshada, wareegyada dhageysiga xanaanada, iyo Baqdaad-e-Simsim Kalfadhiga Bulshada (BSSCV) ee dib u eegista iyo ogolaanshaha laga helo Aqoon-isweydaarsiga Sesame.
"Ma aanan ogeyn inay tahay inaan gacmaha iska dhaqno ka dib markaan dibedda ku ciyaarno. Wax fikrad ah kama haysto waxa jeermisku ahaa. Markaas maalin uun waxaan ka maqlay BSSR inay jiraan noocyo fara badan oo jeermis ah kuwaas oo u xun caafimaadkeenna. "
Saameynta & Gaaritaanka Mashruucan
carruurtu waxay ka qaybqaateen kalfadhiyada xanaanada caruurta xilli kasta
Wareegyo dhageysiyaal ah oo joogto ah ayaa abaabulay xilli kasta
idaacadaha maxalliga ah iyo kuwa qaran ayaa baahiyay barnaamijyada
Ku taageer EAI iyo Sesame Workshop sidii loo naaqusi lahaa iskaashigeenna Afghanistan iyo adduunka oo dhan.